Archive du 20171004
Dahalo nanafika CEG Ny tale maty voakapa famaky, ny vola lasa
Tsy mialamina intsony ny tany ! Notafihin’ny andian-dahalo indray ny talen’ny CEG any alarobia-Bemaha, ny alin’ny alatsinainy 2 oktobra 2017 lasa teo.
Filankevitry ny governemanta Nanakiana an’i Lalao Ravalomanana sy Elysée Ratsiraka
Mazava izao fa manana olana amin’ny fandrindran’asa ny eo anivon’ny fitondram-panjakana ka sahirana niatrika ny fihanaky ny aretina pesta manerana ny nosy.
Rivo Rakotovao Hatao filohan’ny antenimierandoholona…
Raha samy variana amin’ny resaka areti-mandoza pesta sy ny fahasahiranana samihafa ny rehetra amin’izao, dia misoko mangina hatrany amin’ny kajy maloto hitazonana fahefana kosa ny fanjakana HVM.
Taratasin’i Jean Atao hoe nandra ho tezitra!
Miarahaba anao indray aho ry Jean ! Tena manahirana ahy mihitsy ny mitady hevitra hahafahana manome toromarika anao ity mba hialanao amin’izao tsy fahombiazana rehetra mitranga izao.
“Vehivavy mitsinjo ny ankohonany” Novakiana ireo vatan-drakitra teny Ambohimanarina
Mitohy hatrany ny hetsika sosialy ataon’ny depiote Rasoanoromalala Marie Horace avy amin’ny antoko TIM eny amin’ny Boriborintany faha-6 Ambohimanarina nahavoafidy
Nosy Maorisy Vehivavy Malagasy 3 nisy nanolana
Vehivavy malagasy telo no nisy nanolana tatsy amin’ny nosy Maorisy raha araka ny tati-baovaon’ny www.lexpress.mu.
Marc Ravalomanana “Mila mihaona ny Praiminisitra sy ny Ben’ny tanàna”
Raha haverin’ny fanjakana amin’ny kaominina ny SAMVA, ary homena ny kaominina ny andraikitra manala ny fako sy manadio ny tatatra, tsy manome mihoatra ny herinandro izahay, dia madio io.
Mitaraina ireo jamba Tsy voahaja ny zon’izy ireo
Tsy misitraka ny zony amin’ny ankapobeny ireo olona manana fahasembanana eto amintsika. Lohalaharana amin’izany ireo manana olana ara-pahitana na ny jamba, indrindra fa ny vehivavy.
Mifanome tsiny lava eto ny samy Malagasy ary mihemotra hatrany fa tsy mba miroso ho amin’ny tsaratsara kokoa.
ARETINA PESTA “28 no maty”, hoy ny minisitra
Vaovao lehibe mbola mitana ny sain’ny maro hatreto ny fiparitahan’ny aretina pesta eto amintsika.
Tontolon’ny Indostria Ny tantsaha no tokony hamatsy ny akora
Tsy afa-misaraka ny famokarana ambanivohitra sy ny indostria, hoy ny Pr Jean Rasoarahona, manampahaizana momba ny fiompiana sy fambolena.
Kolejy La Lumière Talatamaty Nitokona teny Analakely ny ray aman-drenin’ny mpianatra
Nanatontosa fitokonana manoloana ny biraon’ny ofisim-pirenena misahana ny sekoly tsy miankina etsy Analakely ( ONEP) omaly,
Sekoly ambony UPRIM Amin’ny 05 novambra ny fidirana
Toy ny sekoly ambony rehetra dia efa miomana fatratra amin’ny fandraisana ireo mpianatra vao afa-panadinana Bakalôrea ihany koa amin’izao fotoana izao ny sekoly ambony UPRIM etsy Andavamamba, fepetra iray hahafahan’ireo mpianatra miditra ao aminy.